पामेल उपाध्याय मङ्गलबार, जेष्ठ १३ २०७७
हामी अनुमान लगाउन सक्छौं, हामी र हाम्रो चेतनास्तर र स्वभाव कस्तो होला ! जबकी हाम्रा केही नेताहरु अयोग्य र अदक्ष सिद्ध भएका छन्। त्यसैले दोष नेताको हैन हाम्रो हो। नत्र हिजो अस्तिसम्म कट्टु तान्दै कुद्ने वर्षा नानीले बोलेको बिषयलाई लिएर यत्रो जमात पछिपछि किन कुद्थ्यो होला !
नाम ठ्याक्कै याद भएन। एक महापुरुषले भनेका छन– नेता जनताको बीच बाट जन्मने हो। जनताको चेतनास्तर जुन किसिमको छ र स्वभाव जस्तो छ नेता पनि त्यही स्तर र स्वभावको हुने गर्दछ ता की उ जनतासङ्ग मिल्न सकोस। अब हामी अनुमान लगाउन सक्छौं, हामी र हाम्रो चेतनास्तर र स्वभाव कस्तो होला ! जबकी हाम्रा केही नेताहरु अयोग्य र अदक्ष सिद्ध भएका छन्। त्यसैले दोष नेताको हैन हाम्रो हो। नत्र हिजो अस्तिसम्म कट्टु तान्दै कुद्ने वर्षा नानीले बोलेको बिषयलाई लिएर यत्रो जमात पछिपछि किन कुद्थ्यो होला !
भारतका पूर्व मेजर जनरल जि डि बक्सीले खुलेरै भनेकाछन– माओवादीलाई हामीले पालेर राखेकोमा अहिले आएर धोका भयो। यसको मतलव यहाँ भएको १०बर्षे जंगली युद्ध आफ्नै देशलाई सत्यनाश गरी भारत हित अनुरुपको निम्ति थियो। लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्म चुपचाप राख्न सक्नु पर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। त्यो बाबुरामले त नुनको सोझो गरिरहेकै छ। खोप्लाङ्गेहरु (जो सङ्ग सम्बन्धित) को खप्परमा गिदी पातलिएर आजसम्म माननीय भन्दै हिड्न पाईरहेकै छ। एउटा बूढो भएर थला पर्यो। अर्को अझै पड्काउदै हिडिरहेको छ मानौँ क्रान्तीको भूतको नशा अझै उत्रिएको छैन।
बाह्र हातको टागाले नछुने भेनेजुएलामा अमेरिकाले हेप्यो भन्दै बिज्ञप्ति निकाल्ने। उनिहरु कै भाषामा प्रचण्ड पथ। नेपाल भारत नयाँ क्रान्ती सुरुङ्ग युद्धैमा। रुकुम रोल्पा जाउँला कान्छी बुलेट ट्रेनैमा भन्दै गीत गाउने क्रान्तिका नायक। जति खर्छ गरेपनी कहिल्यैं नसकिने तीन तोला सुन र एक कट्ठा जग्गाका मालिक। पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रवादको खाडो जगाइरहेका नेकपाका अध्यक्ष मने काम्रेटले ती पूर्व मेजर जनरलको भनाईको बिरुद्ध स्पष्टीकरण दिएको वा बिज्ञप्ति निकालेको आजसम्म सुन्न पाईएको छैन। आफ्नै बिरुद्धमा बोलिरहदा काम्रेटको राष्ट्रवादको फेरो समाउन पालिएकै ठाउँमा पुग्नु पर्ने देखियो। यो, देश कै बिडम्बना हो।
जघन्य अपराध गरेको प्रमाणीत हुँदा पनि जयजयकार गर्ने संस्कारको अन्त्य हुँदैन भने। खुलम खुल्ला गल्ती गरेको हुँ भन्छ तर, सार्वजनिक रुपमा माफी मगाउन सकिदैन भने। जनताको आवाजको त के कुरा गर्नु ! कुन स्तर बाट उनिहरु नेता भएको हो भन्ने बारे माथी उल्लेख गरिएकै छ। तबसम्म सुस्तादेखि लिम्पियाधुरा हुँदै लिपुलेकसम्म आइपुग्दा नेपाल आमा धुरुधुरु रुईरहने छिन। प्रत्येक जंगे पिलरका छातीहरुमा चोट पुगिरहने छ। उत्तरी हिम श्रीङ्गखलादेखि लिएर तराईका फाँटहरु चिच्याईरहने छन्। किनभने हाम्रो चेतनास्तरको तापक्रम मापन गरेरै यहाँ नक्कली राष्ट्रवादीहरुले जन्म लिनेछन्।
यस्को निम्ति जनस्तरबाट स्वस्फूर्त रुपमा, सात सालको क्रान्ति भन्नुहोस् वा टिम्मुरबोटे क्रान्ति झापा बिद्रोह भन्नुहोस् वा दस बर्षे जंगली युद्ध। ४६ सालको आन्दोलन भन्नुहोस् वा ६२ र ६३ को आन्दोलन। यी सबै ब्यबस्था परिवर्तनको निम्ति भएका संघर्ष र लडाईहरु, अयोग्य अदक्ष र नक्कली राष्ट्रवादी नेताहरु कै बिरुद्धमा प्रयोग गर्न सफल भईयो भने हाम्रो चेतनास्तर र स्वभावले ती नेताहरुको चेतनास्तर र स्वभावलाई बदलिदिने छ र यो देशको एक चौथाई समस्या आफै समाधान भएर जानेछ। कुनै शंका छैन।